Abụ Ọma 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 8:1-9
Ebube Chineke na ùgwù a na-akwanyere mmadụ
“Aha gị dị nnọọ ebube” (1, 9)
‘Olee uru mmadụ efu bara?’ (4)
E ji ùgwù chọọ mmadụ mma (5)
Ntụziaka e nyere onye na-eduzi abụ; nke ụda Gitit.* Abụ Devid. 8 Onyenwe anyị Jehova, aha gị dị nnọọ ebube n’ebe niile n’ụwa. I meela ka ebube gị dị ukwuu karịa eluigwe.*+ 2 N’ihi ndị iro gị,I sila n’ọnụ ụmụaka na ụmụ ọhụrụ+ gosi ike gị,Ka i wee mee ka onye iro na onye na-emegide gị mechie ọnụ. 3 Mgbe m hụrụ eluigwe gị, bụ́ ọrụ aka* gị,Ọnwa na kpakpando ndị i kere,+ 4 Gịnị ka mmadụ efu bụ nke mere i ji na-echeta ya? Gịnịkwa ka nwa nke mmadụ bụ nke mere i ji na-elekọta ya?+ 5 I mere ka ndị mmụọ ozi* katụ ya. I ji ebube na ùgwù chọọ ya mma. 6 I mere ka o lekọtawa ọrụ aka gị.+ I mere ka ihe niile nọrọ n’okpuru ya: 7 Ìgwè ewu na atụrụ niile na ehi,Nakwa anụ ọhịa dị iche iche,+ 8 Nnụnụ na azụ̀,Ihe ọ bụla na-egwugharị n’oké osimiri. 9 Onyenwe anyị Jehova, aha gị dị nnọọ ebube n’ebe niile n’ụwa.
^ O nwere ike ịbụ, “Gị onye a na-akọ akụkọ ebube ya n’eluigwe.”
^ Na Hibru, “mkpịsị aka.”
^ Na Hibru, “ndị dị ka chi.”
Abụ Ọma 8